Banijya News | युनियन लाइफले पायो धितोपत्र बोर्डबाट सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर बिक्री गर्न अनुमति - Banijya News युनियन लाइफले पायो धितोपत्र बोर्डबाट सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर बिक्री गर्न अनुमति - Banijya News
असार १४, काठमाडौं । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ । युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणमा ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति पाएको हो ।
बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार कम्पनीले रू. ६४ करोड ५० लाख बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ विक्री गर्न असार १३ गते धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि जेठ ९ गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । चुक्तापूँजी हाल रू. १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रहेको छ । निवेदन दर्ता गरेको एक महीनामै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको हो । जीवन बीमा कम्पनीहरुले कायम गर्नुपर्ने रू. २ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्न आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो ।
युनियन लाईफको आईपीओलाई क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी इक्रा नेपालले ‘इक्रा एनपी आईआर ट्रिपल बि रेटिङ’ दिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम प्रभु क्यापिटलले गर्नेछ । २०७७ चैतसम्म ८ करोड २५ लाख ९ हजार खुद नाफा गरेको छ । यस अवधिसम्म ५ अर्ब २४ करोड १६ लाख २३ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै जगेडा कोषमा ७३ करोड ७ लाख १४ हजार, र जीवन बीमा कोषमा ६ अर्ब ९० करोड २ लाख १० हजार रहेको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ५ अर्ब २४ करोड १६ लाख २३ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । हाल ७० प्रतिशत संस्थापक तर्फको शेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीले सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर विक्री गर्न लागेको हो । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा कम्पनीले २०७४ साल असार ६ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको हो ।